Suuqa Iyo Saakay : Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Iyo Wargeysyadu Waxay Qorayaan – Garsoore Sports
Suuqa Iyo Saakay…
Suuqa Iyo Saakay : Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Iyo Wargeysyadu Waxay Qorayaan
Asc kulanti wanaagsan aqriste. Suuqa kala-iibsiga xagaaga waxa uu furmayaa 9ka bisha June ee soo aadan waxaana kooxuhu ay durba sii billaabeen inay sii calaamadeystaan meelaha ay ka dukaameeysanayaan halka kuwo kalena ay sii diyaarinayaan cayaartooyda ay ka fasaxayaan kooxahooda. Haddaba Waxaan halkan kuugusoo gudbineynaa wararkii ugu dambeeyay ee saakay laga qoray suuqa kala-iibsiga.
F.G: Wararka hoos ku xusan saxnaanshiyahooda mas’uul kama ahan Garsoore Sports, waxaa daba raacsan wargeysyada qoraya.
Magacaabista Jose Mourinho ee maamulista kooxda Roma xilli ciyaareedka dambe ayaa laga yaabaa in ay u sababto in 24 jirka khadka dhexe ee xulka Italy ee Lorenzo Pellegrini in uu u dhaqaaqo Liverpool, iyadoo tababaraha reer Portugal la fahamsanyahay inuu xiiseynayo l keenista ciyaartoy uu horay u yaqaanay oo uu kamid yahay burburiyaha Manchester United ee Nemanja Matic (Mirror)
Mourinho ayaa sidoo kale rajeynaya inuu keensado goolhayaha Manchester United iyo xulka Spain David De Gea waa marka uu la wareego shaqada kooxda Roma. (Todofichajes)
Barcelona ayaa wadahadalo la furtay wakiillada weeraryahanka reer Argentina ee Sergio Aguero, oo 32 jir ah, kaasoo si xor ah kaga tagi doona Manchester City xagaaga. (Sky Sports)
Arsenal ayaa hoggaamineysa loolanka loogu jiro saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Brighton Yves Bissouma, oo 24 jir ah, iyadoo Tottenham, West Ham iyo Everton ay sidoo kale kooxdiisa wax ka weydiiyeen helitaanka xiddigan . (Express)
Manchester City ayaa sidoo kale ka fiirsan doonta inay u dhaqaaqdo xiddiga reer Mali ee Bissouma, iyadoo ka laabatay dalabkii ay u soo bandhigtay burburiyaha West Ham ee Declan Rice (Star)
Manchester United ayaa loo sheegay in weeraryahanka Eintracht Frankfurt iyo Portugal ee Andre Silva, oo 25 jir ah, xagaagan ku lagu iibin karato 35 milyan oo euro . (Express)
Chelsea ayaa iibin doonta daafacyadeeda si ay lacag ugu hesho xagaaga, iyadoo daafaca reer Spain ee Marcos Alonso, oo 30 jir ah, iyo daafaca biddix ee Ispaanishka ee Emerson Palmieri, oo 26 jir ah, ay u badan tahay inay ka tagayaan Stamford Bridge. (GOAL)
Dhanka kale, Chelsea iyo Inter Milan ayaa diyaar u ah inay u dhaqaaqaan saxiixa xiddiga qadka dhexe ee reer Bosnia Miralem Pjanic, oo 31 sano jir ah, kaasoo fursadihiiza kooxda Barcelona ay yaraadeen tan iyo markii uu xagaagii hore uga yimid Juventus. (Sport)
Ciyaaryahankii hore ee xulka England Ashley Young, oo 35 jir ah, ayaa sheegay inay ku adkaan doonto inuu iska celiyo ku laabashada kooxdiisii yaraanimo ee Watford haddii kooxda Hornets ay u soo bandhigto heshiis isla markaana uusan qandaraas cusub u saxiixin Inter Milan dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Sky Sports)
Weeraryahanka reer France ee ku guuleystay Koobka Adduunka Florian Thauvin, oo 28 jir ah, ayaa diiday dalab uga yimid Crystal Palace, bedelkiisana wuxuu ka tagayaa Marseille oo wuxuu ku biirayaa kooxda reer Mexico ee Tigres xagaaga. (La Provence )
Ciyaartoyda Real Madrid waxay ka baqayaan in tababarahooda reer France ee Zinedine Zidane, “uu yahay mid daalan islamarkaana xanaaqsan” oo ay macquul tahay inuu isaga dhaqaaqo qandaraaskiisa sannadaha ugu dambeeya marka la gaaro xagaaga. (Goal)
Kaddib markii Real ay ka hartay semi-finalka Champions League-ga oo ay Chelsea ka ciribtirtay, 30 jirka reer Belgium ee Eden Hazard, daafaca reer Brazil ee Marcelo, qadka dhexe ee reer Spain Isco looma arkayo inay qeyb ka yihiin mustaqbalka kooxda. (Marca)
Weeraryahanka Crystal Palace iyo Belgium Christian Benteke ayaa laga yaabaa inuu si bilaash ah ugu biiro Fenerbahce, iyadoo 30 jirkaan qandaraaskiisa Selhurst Park uu dhacayo June 30keeda (Sun)
Everton ayaa u soo bandhigtay daafaca reer England ee Joe Anderson heshiis cusub iyadoo ay sii kordheyso xiisaha kooxaha kubbada cagta Ingariiska ee 20 jirkaan, kaasoo qandaraaskiisa uu dhacayo xagaaga. (Liverpool Echo)
Atletico Madrid ayaa isha ku heysa inay u dhaqaaqdo 21 jirka khadka dhexe ee reer Spain iyo kooxda Barcelona Riqui Puig xagaaga. (Fichajes)
Barcelona iyo Paris Saint-Germain ayaa indhaha ku haya daafaca Monaco ee 23 jirka reer Brazil Caio Henrique. (UOL )
Gunners Oo Arteta Ceyrineysa Kuna Badalaysa Mauricio Sarri Iyadoo United & Villarreal Ay Isku Balansadeen Fiinaalaha Tartanka Europa League-ga
Emery Oo Ku Qoslay Arsenal Kaddib Markii Uu Baacsaday Kooxdiisii Hore Isagoo Villarreal Ku Hoggaamiyay Fiinalkii Ugu Horreeyay Ee Yurub